အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အပညာသင်ဆုများ | USAHello
သငျသညျရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အပညာသင်ဆုအဘို့ရှာကြသည်? USA တွင်, အထူးသဖြင့်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အများအပြားပညာသင်ဆုရှိပါတယ်. ဒီစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျပြည်နယ်အားဖြင့်ပညာသင်ဆုကိုတွေ့လိမ့်မည်, နိုင်ငံသားတို့က, နှင့်ခေါင်းစဉ်သင်ယူခြင်းအားဖြင့်. သင်သည်သင်၏ပညာရေးများအတွက်ပေးဆောင်ကူညီရန်ဤပညာသင်ဆုကိုလျှောက်ထားနိုင်.
ပညာသင်ဆုများသင်သည်သင်၏ပညာရေးများအတွက်ပေးဆောင်ကူညီဖို့ပိုက်ဆံဆုများမှာ. USA တွင်, များစွာသောကျောင်းသားများကသူတို့ကိုကောလိပ်များအတွက်ပေးဆောင်ကူညီရန်ပညာသင်ဆုလျှောက်ထား. ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအဆိုပါပညာသင်ဆုအထူးသဖြင့်ဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကျောင်းသားများအတွက်များမှာ. သူတို့ထဲကတချို့ကအဘို့ဖြစ်ကြ၏ “ပထမမျိုးဆက်” ကျောင်းသားများအတွက်. ဒါဟာသင့်ရဲ့မိဘများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုလိုနိုင်. ဒါဟာအစငျသညျယခုနိုင်ငံသားရှိသူတစ်ဦးလူဝင်မှုသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. နိုင်ငံသားများမဟုတ်သောကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆုလည်းရှိပါတယ်.
တစ်ခုမှာပညာသင်ဆု $10,000 နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်. ဤ ပညာတတ် Non-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လာမည့်နှစ်တွင်ပြန်မရကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. ဒါဟာတဦးတည်းပညာသင်နှစ်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. လျှောက်ထားယူအက်စ်အေပြင်ပတွင်မွေးဖွားရပါမည်နှင့်ပြီးသားကျောင်းမှာဖြစ်ရမည် (သို့မဟုတ်လက်ခံခဲ့သည်) တစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုအမေရိကန်ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားအဖြစ်. ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ကျောင်းအပ်ခငျြတဲ့သူအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြားလည်းအရည်အချင်းပြည့်မီ. မကြာသေးမီကမှတ်တမ်းတစ်ခု GPA ကိုပြသရပါမည် 3.4 သို့မဟုတ် သာ. ကြီး.
Dream.US ပညာသင်ဆု - အမျိုးသားပညာသင်ဆု
Dream.US ပညာသင်ဆု - အခွင့်အလမ်းပညာသင်ဆု
အာဖရိကန်အမေရိကန်များအတွက်ပညာသင်ဆုများ, အမေရိကန်အိန္ဒိယ / Alaska Native, အာရှပစိဖိတ်ကျွန်းသားအမေရိကန်, နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်. သင်တစ်ဦးရှိရမည် “သိသာထင်ရှားသောဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်” အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ. သငျသညျကငျြ့သုံးနိုငျလျှင်သင်သင့်မိသားစုကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ငွေဘယ်လောက်ဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးက $90,000 ကျော်ချီးမြှင့်2ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်နှစ်ပေါင်း, ဒုက္ခသည်များ, နှင့်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်တွေ. သင်တစ်ဦးဘွဲ့ရဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်ရဦးမည်. သင်တို့သည်လည်းနှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် 31.
ဖုန်းနံပါတ်: (212) 547-6926 အီးမေးလ်ပို့ရန်: PDSoros@pdoros.or
နှစ် $1000 ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်သားသမီးတို့အဘို့ပညာသင်ဆု. အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်ကလက်ခံခဲ့ကြရပါမည်. သင့်ရဲ့ GPA ဖြစ်ရမည် 3.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ. အီးမေးလ်ပို့ရန်: scholarships@runningothebulls.com
ကာလီဖိုးနီးယားနေထိုင်သူများ: အာရှပစိဖိတ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ website တွင်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး. အဆိုပါရန်ပုံငွေဖိလစျ၏ကျောင်းသားများအတွက်အပါအဝင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတော်ကြာကြီးမြတ်ပညာသင်ဆုစီမံအုပ်ချုပ်, အာရှ, နှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းအမွေအနှစ်, နှင့်ရွှေ့ပြောင်းလယ်ယာလုပ်သား. သင်ကပညာသင်ဆုကို web စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထိုသူအပေါင်းတို့အဘို့အပလီကေးရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်.
ဖုန်းနံပါတ်: (415) 395-9985
အထိ၏ပညာသင်ဆု $7,000 ဝင်ငွေနည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်. သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ကောလိပ်နှင့်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များအတွက်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်. သငျသညျတှငျနထေိုငျသို့မဟုတ် San Francisco Bay Area ထဲမှာကျောင်းတက်ရမယ်. ပလီကေးရှင်းပွင့်လင်းသည့်အခါသတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဆက်သွယ်ပါ. သို့မဟုတ်သင် nancy@immigrantsrising.org အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်.
ကိုလံဘီယာခရိုင်, မေရီလန်း, နှင့်ဗာဂျီးနီးယား
ယူအက်စ်အေသို့မဟုတ်သူကိုနှစ်ဦးစလုံးမိဘများကို USA ပြင်ပတွင်မွေးဖွားသူနှင့်အသိအမှတ်ပြုအများပြည်သူကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာအချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းဖို့စီစဉ်ကြပြင်ပတွင်မွေးဖွားသူကျောင်းသားများအတွက်. လျှောက်ထားသူများသည်တစ်ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်အတွင်းရှိအထက်တန်းကျောင်းမှာအကြီးတန်းဘွဲ့ရရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ, မေရီလန်း, ဗာဂျီးနီးယားသို့မဟုတ် DC ကမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်က GED grad သို့မဟုတ်, မေရီလန်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဗာဂျီးနီးယား. အဆိုပါပညာသင်ဆုအနေဖြင့်အထိ $5000 သို့ $20,000, ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်.. ပညာသင်ဆုလက်ခံသူများကတော့လူဝင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းများကအစဉ်အလာတန်ဖိုးအရည်အသွေးတွေအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်. Esperanza လည်းသူတို့ကိုကောလိပ် navigate ကိုကူညီလမ်းညွှန်နှင့်အတူကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့, အလုပ်သင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်. အွန်လိုင်း Apply.
HIAS ရွှေ့ပြောင်းသို့မဟုတ်သူ၏မိသားစု HIAS ချီကာဂို၏အကူအညီနှင့်အတူချီကာဂိုဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့သောကျောင်းသားများအမှပညာရေးဆိုင်ရာပညာသင်ဆုထောက်ပံ့, သို့မဟုတ် HIAS ဝင်ရောက်တဲ့သူ’ တစ်ချိန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုန်ဆောင်မှုများ. ပညာသင်ဆုများပါဝင်သည်: အဆိုပါကူညီပေးနေအသက်မွေးဝမ်းဝင်ရောက်သူတွေကိုများအတွက် Benton-Bernstein ပညာသင်ဆု; အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများအတွက် Tilly Warshaw ပညာသင်ဆု, တော်တော်များများနှင့်အခြားသူများကို.
IIE အဖွဲ့သည် - ဒုက္ခသည်နှင့် Asylee ကျောင်းသားများအဘို့အဂျူလီယာ Stasch ပညာသင်ဆု
နိုင်ငံတကာပညာရေးအင်စတီကျု (IIE အဖွဲ့သည်) ချီကာဂိုမြို့ကောလိပ်သို့မဟုတ် Chicagoland အတွက်ကွန်မြူနတီကောလိပ်များ၏တဦးတည်းမှာလေ့လာနေကြသူထောက်ခံမှုကျောင်းသားများအားကမ်းလှမ်းမှုဒုက္ခသည်နှင့် Asylee ကျောင်းသားများများအတွက်ဂျူလီယာ Stasch ပညာသင်ဆု။ ဒုက္ခသည်များအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာသောကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်ခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခြင်းနှင့်ယခုအမြဲတမ်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်ခဲ့ကြကြောင်း ကျေးဇူးပြု. မှတ်ချက် များမှာ ဒါ့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
ချီးမြှင့်မယ့်ခံယူပါလိမ့်မယ် $10,000 ထူးချွန်ကျူရှင်ချိန်ခွင်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ပညာသင်ဆု, အသကျရှငျကုန်ကျစရိတ်, သူတို့ရဲ့ပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များ. အဆိုပါပညာသင်ဆုကိုလည်းခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုနွေရာသီ 2020 အတွက် 1-ရက်သတ္တပတ်ခေါင်းဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်။
Fred သည် S က. Findling သတိရအောက်မေ့ပြောင်းရွှေ့လာသောလူပညာသင်ဆု
အဆိုပါ Fred သည် S က. ပညာသင်ဆု Findling တစ်ဦးတည်းအချိန်ဆုဖြစ်ပါသည် $1500. ဒါဟာလက်ရှိမီချီဂန်ကောလိပ်မှာစာရင်းသွင်းကြောင်းမည်သည့်လူဝင်မှုမှဖွင့်လှစ်. ဆုပေးပွဲအပြေးပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်, ဘာသာ, လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့, အသက်အရွယ်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံသား. သင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်စာစီစာကုံးရေးသားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး. လျှောက်ထားရန်, သင်ဤပညာသင်ဆုထိုက်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြနေတဲ့ 30-ဒုတိယ selfie ဗီဒီယိုကိုပေးပို့. ထက်ပိုရှည်သောဗီဒီယိုများအား 30 စက္ကန့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ.
ပါရာဒိုင်း ဖောင်ဒေးရှင်းကပညာသင်ဆု / DH Gustafson မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ကနေအထိပညာရေးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဆုပညာသင်ဆု Ascend $2,500 သို့ $20,000 အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်ရန်တစ်ဦးက New York City, အထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရထားသူရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏လူဝင်မှုကျောင်းသားများနှင့်ကလေးများ, မသက်ဆိုင်လူမျိုးစု၏, အမျိုးသားရေးဇာစ်မြစ်, သို့မဟုတ်လူဝင်မှုအခြေအနေ. လျှောက်လွှာကာလနိုဝင်ဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်သည့်အခါအွန်လိုင်း Apply.
သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်းနေသောကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်ကျောင်းသားများကိုအိုးအိမ်မဲ့အဆိုပါပညာသင်ဆုထောက်ပံ့. ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများကိုအပြည့်အဝကျူရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, အိမ်ရာ, လူအပေါင်းတို့ကိုဖြတ်ပြီးဘွဲ့ကြိုသို့မဟုတ်ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီလိုက်စားစဉ်အကူအညီများသည်အသက်ရှင် 18 ကိုလံဘီယာကျောင်းများနှင့်တွဲဖက်, ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဖြေရှင်းမှကိုလံဘီယာရဲ့အပြည့်အဝအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကတိကဝတ်ကိုထင်ဟပ်. ဒီပရိုဂရမ်မှတက်ကျူးလွန်ပါလိမ့်မယ် $6 အထိအထောက်အပံ့အတွက်သန်း 30 နှစ်စဉ်ကျောင်းသားများကို. လမ်းညွှန်သင်ပြခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုအဆိုပါပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်, အဖြစ်ကိုလံဘီယာမှာကျောင်းများနှင့်ကျောင်းသားအဖွဲ့များက. မှာအွန်လိုင်း Apply ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာစာမျက်နှာ.
အဆိုပါမာရိသညျဘလမ် Somit ပညာသင်ဆုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ $4,000 ($2,000 စာသင်နှုန်း) Buffalo တက္ကသိုလ်တစ်ခုဘွဲ့ကြိုဖို့, နယူးယောက်, ဇီဝဓါတုဗေဒအထူးပြုသူ, ပြီးတော့ biomedical သိပ္ပံသို့မဟုတ်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ. preference ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနေသောကျောင်းသားများကိုပေး, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်ကောလိပ်ကျောင်းသားကလေးများ. အဆိုပါ website တွင် Apply.
ဖုန်းနံပါတ်: (716) 829-3955
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအဘို့အပညာသင်ဆု, ဒုက္ခသည်များ, နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးဝိတ်ကောင်တီအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရ. သငျသညျလျှောက်ထားရန်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများမလိုအပ်ပါဘူး.
သာ. ကွီးမွတျစင်စင်နာတီ tri-ပြည်နယ်ဧရိယာ၌နေထိုင်သည့်ဒုက္ခသည်များအတွက်ပညာသင်ဆု. အားလုံးဒုက္ခသည်တွေလူထုမှာအဆင့်မြင့်ပညာရေးလိုက်စား, ကိုယ်ပိုင်, USA တွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အဘယ်သူမျှမအသက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်.
အမ်း Biggs / သဲလျမာ Salazar ပထမဦးစွာ-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများပြောင်းရွှေ့လာသောလူကလေးများများအတွက်ပညာသင်ဆုပြည့်စုံ
သူတို့အားအနည်းဆုံးမိဘရှိသူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူကို - ဤပညာသင်ဆုပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်လူဝင်မှုသားသမီးတို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. preference မက္ကဆီကိုသို့မဟုတ် Central အမေရိကတိုက်မှရွှေ့ပြောင်းလာသူများကလေးတွေပေးတော်မူလတံ့.
ဖုန်းနံပါတ်: (210) 458-8000
ဒုက္ခသည်နောက်ခံနှင့်အတူအချိန်ပြည့်ကျောင်းသားအပြည့်အဝပညာသင်ဆုနှင့်လမ်းညွှန်, တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှာစတင် freshman ကျောင်းသားများအားပေးသော preference ကို. ၏ GPA ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရှိရမည် 2.5 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား.
ဖုန်းနံပါတ်: (801) 360-5707
အဲဖရက်ဟူဂို Radke နှင့် Else Gerda Radke ပညာသင်ဆု
၏ပညာသင်ဆု $1000 အဘယ်သူသည်အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက် Averett University မှဘွဲ့ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်ပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်အမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်. တစ်တန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအားထိန်းသိမ်းရန်ရှိရမည် 3.0 သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သော.
ဖုန်းနံပါတ်: (434) 791-5600
ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏မိသားစုများတစ်ဦးအနိမ့်ဝင်ငွေရှိကျောင်းသားများကိုအဘို့ဖြစ်၏. တစ်ဦးကစွန့်လွှတ်သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်မည်ဟုဆိုလိုသည်. သငျသညျအထိလေးကျောင်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. စွန့်လွှတ်ယူအက်စ်အေသို့မဟုတ်အမေရိကန်နယ်မြေများတွင်ဝင်ငွေနည်း 11 နှင့် 12 တန်းကျောင်းသားများကိုမှရရှိနိုင်ပါသည်. ယူအက်စ်အေအပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေသက်ညှာစမ်းသပ်အခကြေးငွေရှိသည်ဖို့နိုင်မည်အကြောင်း. သငျသညျအဆင့်၌ရှိကြ၏လျှင်သင် SAT ဘာသာရပ်စာမေးပွဲကြေးစွန့်လွှတ်ဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်9ဖြတ်. 12.
Ariane က de Rothschild (AdR) သူချင်းသငေ်္ဘာ: လူမှု Entrepreneurship & cross-ယဉ်ကျေးမှုကွန်ယက်
ကက်သလစ်ကယ်ဆယ်ရေးန်ဆောင်မှုများနိုင်ငံတကာ DevelopmeNT အပေါင်းအဘော်တို့အစီအစဉ်
အာဖရိက၏အနာဂတ်ပညာရှင်များ (FSA) ကျောင်းသားများကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့ Utah-based အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကျောင်းသားများအတွက်. FSA ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနေသောအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒုက္ခသည်များ, ပညာသင်ဆုနှင့်အတူအာဖရိကမှသို့မဟုတ် asylees, mentorship, လူအပေါင်းတို့ဘာသာရပ်များအတွက်အခမဲ့ကျူရှင်. န်ဆောင်မှုများတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသားများ၏လိုအပ်ချက်များ fit မှစိတ်ကြိုက်နေကြတယ်. ဥပမာ, ကောလိပ်သွားဖို့စီစဉ်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများအတွက်, သူတို့ကောလိပ်ကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးအောင်မြင်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ဘို့ mentorship ပေး. သငျသညျ FSA ထံမှအကူအညီကိုလက်ခံရရှိစိတ်ဝင်စားလျှင် Email.
2 သို့3၏ပညာသင်ဆု $2,500 - $5,000 ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအာရှနှင့် / သို့မဟုတ် Pacific ကျွန်းလူမျိုးစုနှင့်နေထိုင်သူ၏ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ (ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာပိုမိုနှစ်သက်). အဆိုပါ website တွင်လျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါ. အာရှပစိဖိတ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ.
ဖုန်းနံပါတ်: (877) 808-7032
ဖုန်းနံပါတ်: (415) 857-4272 အီးမေးလ်ပို့ရန်: info@gapafoundation.org
လှုံ့ဆော်မှုဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သငျသညျသိပ္ပံလေ့လာနေအပေါ်စီစဉ်ရဦးမည်, အရှေ့တောင်အာရှအမွေအနှစ်ဆေးဘက်သို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒကျောင်းသားများကို.
အာရပ်အမေရိကန်တွေဒါမှမဟုတ် USA တွင်လေ့လာနေအာရပ်နွယ်ဖွားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရရှိနိုင်သောအများအပြားပညာသင်ဆု. ပညာသင်ဆုအပြည့်အဝစာရင်းများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး.
အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များအာရပ်အမေရိကန်အစည်းအရုံး (အို) – မြို့တော်ဧရိယာ
ထိတှေ့: Yvonne အာဗြဟံကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်: yabraham@aawbc.org
ငါးပညာသင်ဆု $5000 ကအနည်းဆုံး၏ကျောင်းသားများအားနှစ်စဉ်ပေးသောအသီးအသီး 50% ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ကြသူဖိလစ်ပိုင်အမွေအနှစ်. အဆိုပါ website တွင်လျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါ. အာရှပစိဖိတ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ. ဖုန်းနံပါတ်: (415) 395-9985 အီးမေးလ်ပို့ရန်: scholarship@asianpacificfund.org
လက်တင် / ဟစ်စပန်းနစ်ကျောင်းသားများကို
အဆိုပါကောလိပ်မှကူညီစောင့်ရှောက်ရေးရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ် (စခန်း) ထက်ပိုပြီးကူညီပေးသည်တဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရ-ရန်ပုံငွေပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နှင့်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် 2,000 ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ရောက်ရှိနှင့်အောင်မြင်ဖို့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ရာသီအလိုက်လယ်ယာ-အလုပ်လုပ်နောက်ခံကနေနှစ်စဉ်ကျောင်းသားများကို. သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ကျောင်းဆင်းပွဲသည်အထိကောလိပ်၏သူတို့ရဲ့ပထမနှစ်ကာလအတွင်းဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောပညာသင်နှစ်ထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိ. သင်ကစစျဆေးနိုငျ Camp အစီအစဉ်များအတွက်စာရင်း တစ်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ပြည်နယ်ရှိပါလျှင်ကြည့်ဖို့.
တစ်ဦးက $2000 မည်သည့်လူမျိုးရေးသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံ၏လယ်ယာလုပ်သားများလယ်ယာလုပ်သားများသို့မဟုတ်လေးအတွက်ပညာသင်ဆု. အမေရိကန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်ရမည်. အဆိုပါ website တွင်လျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါ. အာရှပစိဖိတ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ.
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ Rising လည်းတစ်ဦးစောင့်ရှောက် သည်အခြားပညာသင်ဆုများ၏ updated စာရင်း နေထိုင်ခွင့်၏နိုင်ငံသားများ၏အထောက်အထားမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်း.
အကြီးအ-အဆင့်နှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆု. သင်တစ်ဦး 4-တစ်နှစ်ကောလိပ်မှာဘွဲ့ကြိုဘွဲ့လိုက်ရန်စီစဉ်ရဦးမည်. လျှောက်ထား DACA သို့မဟုတ် TPS များအတွက်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်. သင်သည်အခပေး Intern များကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်.
ဤသည်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုမြောက်အမေရိကအတွက်မက္ကဆီကန်ဖက်ဒရေးရှင်းကောင်စီကကမ်းလှမ်းနေသည် (cöfe). ဒါဟာဆုပညာသင်ဆု၏ $500 ကွန်မြူနတီကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုရန်နှင့် $1,000 Los Angeles မှာလေးနှစ်ကောလိပ်များသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်များတက်ရောက်ခြင်းဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုရန်, လိမ္မော်သီး, မြစ်ကမ်း, ပြည်တွင်းရေကြောင်းအင်ပါယာ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစန်း Bernardino နှင့် Ventura နိုင်ငံများ. လျှောက်ထားအထောက်အထားမဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ် AB-540 သို့မဟုတ် DACA မှအကျိုးရမယ်. ဒါ့အပြင်သူတို့ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခု COFEM-ဆက်နွယ်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်ကလပ်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရ.
ဖုန်းနံပါတ်: (213) 417-8394
ဖုန်းနံပါတ်: (212) 205-6486 အီးမေးလ်ပို့ရန်: srf@iie.org
အလုပ်ရှာဖွေရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီထောက်ပံ့ရေးဘွဲ့ကျင်းပရန်နှင့်တိုးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်လုပ်သားအင်အား reenter ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသူမိန်းမတို့အားရန်ပုံငွေပေး. မူလတန်းထည့်သွင်းစဉ်းစား nontraditional နယ်ပယ်များတွင်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဆင့်မြင့်ဒီဂရီသို့မဟုတ်အထောက်အထားများလိုက်စားအရောင်နှင့်အမျိုးသမီး၏မိန်းမတို့အားပေးထား. လျှောက်ထား U.S ဖြစ်ရမည်. နိုင်ငံသားများသို့မဟုတ်သူ၏နောက်ဆုံးဒီဂရီဇွန်လမတိုင်မီလက်ခံရရှိခဲ့သည်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ 30, 2014. ရန်ပုံငွေများကျူရှင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ, အဖိုးအခ, စာအုပ်များ, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ဒေသခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်မှီခိုစောင့်ရှောက်မှု. အဆိုပါ website တွင် Apply.
E-mail ကို: connect@aauw.org
အဆိုပါ Hegg hoffet ရန်ပုံငွေ
အနီရောင် Thread Fellowship Award ဆု
ဧဒုံ Thread Fellowship လာမယ့် fall.The မိတ်သဟာယဖွဲ့ထဲမှာအမေရိကန်ကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝင်ပါလိမ့်မည်သူကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနောက်ခံကောလိပ်-ခညျြနှောငျအမြိုးသမီးမြားမှရရှိနိုင်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်: တစ်ဦး $1000 ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်နှစ်ကြာ mentorship ထောက်ခံမှု. GPA သို့မဟုတ် U.S မျှရှိပါတယ်. နေထိုင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ. ဒီ application တော်တော်များများရေတိုအဖြေကိုမေးခွန်းပါဝင်ပါသည်, နှစ်ခုအက်ဆေး, ထောက်ခံချက်များနှင့်စာနှစ်စောင်. ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြံပြုချက်များအနည်းဆုံးတဦးတည်းအနေနဲ့ပညာရေးကိုကိုးကားဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်, ထိုကဲ့သို့သောဆရာသို့မဟုတ်တစ်လမ်းညွှန်မှုတိုင်ပင်အဖြစ်. အဆိုပါ website တွင် Apply.
Careeronestop ပညာသင်ဆု Finder
Careeronestop လူတွေကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အလုပ်အကိုင်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရဝက်ဆိုက်. ဒါဟာသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ပညာသင်ဆုများစာရင်းကိုရှိပါတယ်. သငျသညျလေ့လာမှုအဆင့်ကိုအားဖြင့်သို့မဟုတ်နေရာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် filter နိုင်ပါတယ်. အောက် “ဆက်နွယ်မှုလိုအပ်,” သင်ပင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအတွက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက် filter နိုင်ပါတယ်.
သင်တို့သည်လည်းထောက်ပံ့ငွေများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ပညာရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏အခြားကြင်နာတတ်သော. ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကူအညီများ၏ရုံးထောက်ပံ့ငွေကိုထောက်ပံ့ပေး, ချေးငွေများ, ကောလိပ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြောငျးအတှကျနှငျ့အလုပျ-လေ့လာမှုရန်ပုံငွေများ. မှာ Apply အခမဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးများအတွက်ဖက်ဒရယ်လျှောက်လွှာ (FAFSA).
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့များစွာသောပညာသင်ဆုရှိပါတယ်. သငျသညျကိုထည့်သွင်းဖို့အခြားသူများရဲ့သိလျှင်, ကျေးဇူးပြု ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့. ကျနော်တို့စာရင်းသူတို့ကို add ပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့ GED Getဒီပလိုမာ®